प्रचण्ड भन्छन् -ओली, खनाल र नेपाललाई मैले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > प्रचण्ड भन्छन् -ओली, खनाल र नेपाललाई मैले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ !
प्रचण्ड भन्छन् -ओली, खनाल र नेपाललाई मैले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ !
May 16, 2019 May 16, 2019 GRISHI460
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो योगदानलाई अवमूल्यन नगर्न एमालेलाई चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालिन एमालेका तीन जना नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सामथ्र्य आफूले मात्र राखेको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।
तत्कालिन एमालेको युवा संगठन युवासंघ नेपालको २९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई आफूले लाइन लाएर प्रधानमन्त्री बनाएको दावी गरे ।
प्रचण्डले भने, ‘माधव नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता हो, उहाँ संसदमा चाहिन्छ भनेर चिठी लेख्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था ल्याएको मैले हो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेता हुँदा हुँदै मैले नै झलनाथजीलाई बनाउँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता बाँच्छ भनेर छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ । केपी ओलीलाई संविधान बनाउँ तपाई प्रधानमन्त्री भनेको हुँ । यो पटक पनि चुनावअघिनै तपाई प्रधानमन्त्री भनेको हुँ । अब तपाईहरुले मलाई के भन्नुहुन्छ रु अस्थिर भन्नुहुन्छ कि क्या गज्जबको भन्नुहुन्छ ’!
मेरो होइन, कांग्रेस सांसदका शब्द हटाइएका हुन्ः ओली
चिनियाँ राजदूत संग ‘प्रचण्ड’ले मागे माफी !
August 28, 2020 September 9, 2020 Raju Thapa